Xasan Sheekh: Hala xushmeeyo go'aanka Soomaaliya - BBC Somali
Xasan Sheekh: Hala xushmeeyo go'aanka Soomaaliya
3 Nofembar 2014
Image caption Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka soo horjeestay isku shaandeyn uu sameeyay Ra'iisalwasaare Cabdiweli
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si kulul uga jawaabay baaqyo ka soo yeeray Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub oo ah in madaxweynaha iyo ra'iisalwasaaraha ay wada shaqeeyaan.
Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa horey ugu baaqey in labada mas'uul ay wada shaqeeyaan ilaa iyo sanadka 2016, xilligaas oo la filayo in doorasho laga qabto dalka.
Warbixin qoraal ah oo uu Midowga Yurub soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in uu aad uga walaacsan yahay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo Ra'iisalwasaaraha, waxa uuna intaas ku daray in khilaafku uu haatan saameyn ku yeelan karo hannaanka sameynta Dastuur qaran iyo dowladnimada Soomaaliya.
Sidoo kale midowga Yurub waxa uu ugu baaqay golaha Baarlamaanka in ay xushmeeyaan hannaanka sharciyadda iyo in hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya hadda looga baahan yahay in ay qaataan masuuliyad isla markaana ay muujiyaan siyaaasad ogolaaneysa wadda noolaansho.
Khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisalwasaaraha ayaa dhawaan bannaanka u soo baxay kaddib markii madaxweynaha uu sharci darro ku tilmaamay isku shaandhayn uu ra'iisalwasaaraha ku sameeyay golahiisa wasiirada.